China Truss welded site na akụkụ anọ tube factory na-emepụta | Honghua
Truss welded site akụkụ anọ tube
The square tube ofu truss bụ ihe kasị nkịtị truss na ahịa. Ọ bụghị nanị na ọ na-ewuli ogologo oge kamakwa ọ na-enwe nnukwu ike, ọ dị mfe ịwụnye ma dozie ya, enwere ike iji ya n'ime ụlọ na n'èzí. Ntuchi adịghị mkpa njikọ isi akụkụ anọ, yabụ ọ bụ ụgwọ nchekwa.
Akara okirikiri a na-ejikwa okirikiri bụ ihe a na-ejikarị eme ihe, nke enwere ike iji n'ime ụlọ ma ọ bụ n'èzí iji wuo ụlọ ngosi ma ọ bụ mgbidi ndabere. TRUSS, nke nwere ike dochie ihe mkpuchi aluminom ọdịnala TRUSS (nke a na-akpọkarị TRUSS frame), enweghị ike apịaji, yabụ ọ nwere ike iguzogide ikike dị ukwuu ma chọọ nkwado ọ bụla maka oke ya ruo 13 mita. A na-ejikwa eriri okirikiri a na-ejikwa ya rụọ isi ya.
Nke gara aga: Weld square tube
Osote: Truss welded site n'akuku